Iingcebiso zooVimba abagcina iinkcukacha zakudala - 1aviagem.com
Kulungile, kuba sisekuhlaleni, ndaye ndagqiba ekubeni ndihlole ezinye zeefoto ezindala kwaye phakathi kwazo ndafumana olunye uhambo lwam lokuqala eParaguay. Kwaye ndacinga: Yhu, bathetha kancinci ngeParaguay, kutheni ndingathethi kancinci ngayo? Nasi ke isiphumo. Iphi i? IParaguay ikuMazantsi eMelika ...
I-3-uhambo lweentsuku ezintathu zeBariloche - eArgentina
Uluhlu lweentsuku ezi-3 zokuhamba kweBariloche - iArgentina Kwaye ngeli xesha lokuvalelwa ayikho into ebhetele kunokuthatha i-albhamu yakudala kwaye ujonge iifoto. Obuye wandibuyisela kuhambo lwam lokuqala lokuya eBariloche, eseArgentina. Ndihlala nje iintsuku ezintathu esixekweni, ndakwazi ukubamba izitishi ezimbini. Ilanga nekhephu. KANYE…
Funda ngokugqithisileyo I-3-uhambo lweentsuku ezintathu zeBariloche - eArgentina
Njengoko wathenjiswa kwisithuba sangaphambili ngexesha elizayo ndaya kuxoxa ngeParis kuza kufaka iingcebiso apha apha. (Iposi apho ndiyifungisa lesi sithembiso ngulo) Kulungile ke ixesha lokuba sigcine isithembiso. Into yokuqala omele uyenze isetyenzisile indawo yakho yokuqala ...
Iingcebiso eBerlin - eJamani - izinto ze-10
I-Canada - njani malunga neNiagara Falls?
Namhlanje siza kutyelela i-Niagara Falls. Ukusuka eToronto unako ukufikelela kwiNogenda yaseNiagara ngokusesikweni. Ku malunga nokuhamba kweeyure ezimbini ukusuka kwi-Via Rail. ngexabiso le-24,86 CAN (iiDolada zaseThanada). Kuqoqosho lweklasini elungileyo ngendlela. Isitimela sinokoni, i-wifi, amagumbi okuhlambela kunye ...
Funda ngokugqithisileyo I-Canada - njani malunga neNiagara Falls?
Kuthiwani ngokuphuma kwikhobe yaseRashiya usebenzisa umzila ongaphantsi kweMoscow?
Namhlanje ngumhla wokugqibela weNdebe yeHlabathi eRashiya (2018), kwaye amaqela amaninzi sele ebuyele ekhaya. mhlawumbi eyona nto yayiyibhasi kwisikhululo. Kodwa ke kubakhenkethi, nangona kunjalo, kude kufikeleleke ukuba uthathe umzila ongaphantsi komgwaqo uze wenze enye inyawo ngaphambi kokuba ubhengeze umnqweno waseMoscow ...
Funda ngokugqithisileyo Kuthiwani ngokuphuma kwikhobe yaseRashiya usebenzisa umzila ongaphantsi kweMoscow?
UTHETHEKE yintoni na kwaye njani? Ewe, unokugcina imali.
Molo, unjani? Kuyo siza kuthetha nge-STOPOVER! (Yintoni leyo?) Stopover, ayikho enye into edibanisa nokunxibelelana phakathi kweenqwelomoya ezinde, ukutshintsha ube ngumntwana kwimeko apho kunokwenzeka ukuba uyeke ukwazi indawo kwaye uqhubeke kwindiza enye. Ivela kwisiNgesi: “Yima ngapha”…
Funda ngokugqithisileyo UTHETHEKE yintoni na kwaye njani? Ewe, unokugcina imali.
Iphulo leSkhumbuzo saseRashiya.
Abantu abalungileyo kuwe abaya eRussia, eSt. Petersburg, eMoscow, eNovgorod, njl. Ingcebiso kukuba ukonwabele iiSouvenirs apho. Qaphela ukuba "ubugcisa" baseRussia baneeMazi zeHabergé ezidumileyo, iMatroskas, kunye nabanye abaninzi. Kwaye ezinjani iinkcukacha zabanyangi! Kwividiyo engezantsi, sinendawo eqingqiweyo ye-Fabergé Egg.…
Funda ngokugqithisileyo Iphulo leSkhumbuzo saseRashiya.
Dibanisa 136 nezinye ababhalisele
Umxholo: Ndikhwele Uyilo loMxholo wePro
Akukho mifanekiso ye-Instagram ifunyenweyo.
Makhethande kwaye uncede ndikwazi ihlabathi (akubizi nto ihambayo)
Ndandwendwela amazwe e-34 United Nations (17.61%) kwi-193.
i-imeyile ukuba ingalahlekelwa izithuba ezintsha.
Faka idilesi yakho ye-imeyile ukuze ulandele le bhulogi
Khangela i-imeyile yakho kwaye uqinisekise